2022 – SainPwar
SainPwar > 2022
အငျးဝပကျြကိနျးနဲ့ တဈထပျတညျးပါပဲလား။ အငျးဝပွညျကွီး အလုံးစုံပကျြစီးစတေဲ့ ဖကျြဆီးခဲ့တဲ့မငျးဟာ ကွာသပတေးမငျး ချေါ ဟံသာဝတီမငျးပါတဲ့။ ၁၆ နှဈနဲ့ ဘုရငျဖွဈခဲ့ပွီး ဗဒေငျ၊ ယတွာ အလှနျယုံကွညျတယျ။ အဆောငျလကျဖှဲ့၊ အထကျလမျး၊ အောကျလမျး၊ အစီအရငျ၊ ဂါထာ၊ မန်တရားတှကေို ပွုလုပျစတေယျ၊ ဆောငျထားတယျ။ အသိပညာဉာဏျ၊ ဆငျခွငျတုံဉာဏျ အလှနျအမငျး အားနညျးတယျ။ ပညာရှိမှူးမတျတှကေို -တျတယျ၊ ဖမျးတယျ၊ ဖယျရှားတယျ၊ လူမိုကျတှကေို မွှောကျစားတယျ။ ဘှဲ့ထူး ဂုဏျထူးတှကေို ပေးတယျ။ မိမိကိုယျကိုလညျး မတနျမရာ ဘှဲ့ထူး ဂုဏျထူးတှကေို သတျမှတျအမညျတပျတယျ။ ...
ယနေ့ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ပြံ့နှံ့နတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျကတော့ စကစ ကြောငျးခနျးထဲမှာ တဈတော့ဆော့နတေဲ့ ဆရာမ တဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ မူလတနျးကလေးတှေ ရှိတဲ့ စာသငျခနျးထဲမှာ ကြောငျးစိမျးဝတျစုံ အပွညျ့အစုံဝတျထားတဲ့ ဆရာမ တယောကျဟာ အဆိုတျော ရှရေညျဖွိုးမောငျရဲ့ ကိုယျရံတျော သီခငျြးအလိုကျနဲ့ အညီ ခန်ဓာကိုယျကို လှုပျရမျးပွီး ကခုနျနတေဲ့ ပုံရိပျတှေ ပါဝငျပါတယျ။ နောကျက မူလတနျးကလေးတှကေလညျး တဈတော့ ကစားနတောကို သိပွီး လိုကျကွညျ့နတောကို တှရေ့ပါတယျ။ မလိုလားအပျတဲ့ ပွဿနာတှေ ကြောငျးသူကြောငျးသားတှေ ကွားမှာ ...
ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ ယောက်ျား အမျိုးအစား (၇) မျိုးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ် ဘယ်လောက်ပဲ လန်းနေနေ၊ မိမိုက်နေနေ မပတ်သင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေရှိ ပါတယ် ကိုယ့်အနားမှာ ဒီလိုလူမျိုးက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ရှိနေရင် မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေး အတိုင်းပဲ ထားပါ လုံးဝကို ကိုယ့်ဘဝထဲ၊ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲ အဝင်မခံပါနဲ့ တတ်နိုင်ရင်တော့ အနေနီးပြီး စိတ်ယိမ်းယိုင်တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ရှောင်ပါ လုံးဝရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျား အမျိုးအစားတွေကတော့… ၁- ချစ်သူရှိသူ ဘယ်လောက်ပဲ လန်းနေနေ၊တော်နေနေ လုံးဝရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျားအမျိုးအစားထဲမှာ ဒီလိုလူမျိုးပါပါတယ် ချစ်သူရှိနှင့်နေပြီးဖြစ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးဆိုရင် ...
စြေးဦးလဲ ပေါကျ…အိမျလဲ တခါတညျး ပွနျရတာ ဒါပထမဆုံးပဲ အဖှား အသကျ (၇၀)ကြျောပွီတဲ့…မွနျမာမုနျ့လေးတှေ သူမြားဆီက တဆငျ့ပွနျယူပွီ တလမျးဝငျ တလမျးထှကျ ရောငျးတယျ အဖှား…လိုငျးကားပျေါက ဆငျးလာတာမွငျတော့… အဖှားရေ…လာပါအုံး…ဘာတှေ ပါတုနျး?? မုနျ့ဦးနှောကျ ၊ ဌကျပြျောပေါငျး ၊ ထနျးသီးမုနျ့ ၊ မုနျ့ဗိုငျနောကျပါတယျ သား ဟုတျ အဖှား… ဘယျလိုတှရေောငျးတာလဲ?? ၊ ကိုယျ့ဘာသာ လုပျရောငျးတာလား အဖှား?? မဟုတျပါဘူး သားရယျ…အဖှား သူမြားဆီက တဆငျ့ပွနျယူရောငျးတာပါ သားရယျ…ဒါတှေ အကုနျ အရငျး (၁)သောငျးခှဲရှိပါတယျ ...
မရှာရငျလညျးအရှငျး ရှာမယျဆို ၇ရကျ ၇နှဈလီ ဆကျတိုကျရှာမယျ့မိုး၊ မိုးမလာခငျအပငျလေးတှရှေငျသနျအောငျ ရပေေးထားကွပါနျော….
နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ မိုး ⛈⛈⛈⛈ Rainy night 🌧🌧🌧29/06/2022 AT 7:20PM Mogokrain ⛈⛈⛈ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအောက်မှာ ခါဦးမိုးတို့အကြိမ်ကြိမ်ပြိုမယ်မိုး မိုးကုတ်မြို့ ISSUED TIME 29/06/2022 နောက် ၂၄နာရီမှ ၄၈နာရီအတွင်း တာချီလိတ်ခရိုင် ကျိုင်းတုံခရိုင် လင်းခေးခရိုင် တောင်ကြီးခရိုင် လွိုင်လင်ခရိုင် လားရှိုးခရိုင်မူဆယ်ခရိုင် ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပါတယ် နောက် ၂၄နာရီအတွင်း ရမည်းသင်း မိတ္ထီလာခရိုင် ညောင်ဦးခရိုင် ပခုက္ကူခရိုင် မြင်းခြံခရိုင် ကျောက်ဆည်ခရိုင် မန္တလေးခရိုင် စစ်ကိုင်းခရိုင် မုံရွာခရိုင် ကလေးခရိုင် ရွှေဘိုခရိုင်ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး တန့်ဆည် ...
နိုငျငံခွားအထိ ပညာတျောသငျသှားခဲ့ပွီး ဘှဲ့ရခြိနျမှာတော့ မှေးရပျဒသေဆီပွနျလာကာ စာသငျကွားပေးနတေဲ့ မိနျးကလေး
ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများရှိ ကလေးငယ်များသည် ပညာရေးအတွက် ဦးစားပေးခြင်းမျိုးမခံရပဲ အရွယ်မရောက်သေးခင် ကျောင်းထွက်ရကာ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် တွေ့ရာအလုပ်ဝင်လုပ်ပြီး ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးရတာမျိုး ဖြစ်လာခဲ့သည် သို့ဖြစ်၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Lao Caiပြည်နယ် တောင်တန်းကျေးလက်ဒေသတွင် နေထိုင်သော အသက်၃၀အရွယ် chao thi yen လို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် ပညာရေးကို ဦးစားမပေးခဲ့၍ သူမရဲ့မိသားစု အခက်အခဲကြောင့်ပဲ ကျောင်းပြီးဆုံးအောင်မတက်ခဲ့ရပဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ရသည် မိန်းကလေးသည် အခြားသောကလေးတွေနဲ့မတူပဲ စာကြိုးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင် အရည်အချင်းလည်းရှိတာကြောင့် သူမကျောင်းထွက်ခဲ့ရတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သော ဆရာမဖြစ်သူက အိမ်ထိလိုက်လာပြီး သူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကို ပညာမတတ်ပါက ဒုက္ခဆင်းရဲတွင်းကလွတ်မြောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း နားလည်အောင်ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့သည် ...
ညီလေး …. ဥကရဈထစခနျးသိမျးပှဲမှာ မငျး ပေးဆပျခဲ့တယျ တျောလှနျရေးနဲ့KNU အတှကျ တာဝနျကတြောထကျ ပိုပါတယျ ညီလေး ရာ
ဥကရစ်ထစခန်းတိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ KNU ကလက်ဖြောင့်စနိုက်ဘာလူငယ်လေးအကြောင်းကို ကိုရဲမင်းက အခုလို ဝမ်းနည်းစွာမျှဝေလာခဲ့ပါတယ် ညီ​လေး …. ဥကရစ်ထစခန်းသိမ်းပွဲမှာ မင်း ​ပေးဆပ်ခဲ့တယ် ​တော်လှန်​ရေးနဲ့ KNU အတွက် တာဝန်​ကျေတာထက် ပိုပါတယ် ညီ​​လေး ရာ…. ထိုင်းက ရိက္ခာပစ္စည်း​တွေ လာရင်လည်း အကိုနဲ့အတူ မင်းကူသယ်​ပေး ကူထမ်း​ပေး စခန်း​တွေ အ​ရောက်ငါတို့အတူ ​ပေးပို့ နိုင်ခဲ့တယ်…. မင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး အကို စိတ်မ​ကောင်း အဖြစ်ရဆုံးက ​​ကော်သူး​လေမှာ ​ဘောလုံးပွဲကန်​တော့ မင်းက လက်​ဖြောင့်စနိုက်ပါသမား တစ်ဦးဖြစ်​ပေမယ့် ​ဘောလုံးကို​တော့ အရမ်းမပိုင်​တော့ ...
ပနျးမဝငျသေးဘဲ တကျထောငျတော့ လျောကီးတှဖွေဈကုနျရော။
zawgyi နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်အချို့ကတော့ ပြည်သူတွေဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီး အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့လို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် တစ်ယောက်ကလည်းပြည်သူတွေဘက်ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၅၀၅(က)နဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်နေရာကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ကိုပေါက် ကတော့ ရောက်ရာနေရာကနေ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် ဟာ အနုပညာမှာဘက်စုံတော်ရုံမက ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာလဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ပန်းမဝင်သေးဘဲ တက်ထောင်တော့ လော်ကီးတွေဖြစ်ကုန်ရော။ S-ဆရာကြီးတွေ FBပေါ် likeရဖို့ပြိုင်ကြွားကြတာနဲ့ ရန်သူကို ...
မုနျ့ဖတျထုပျက (၆၀)လောကျ ကနျြသေးတယျ…ဒါလေး ရောငျးကုနျမှ နောကျနေ့ ထမငျးစားရမှာ သား
ည (၁၀)နာရီထိုးနပွေီ….. အိမျပွနျခငျြတာပေါ့ သားရယျ ဘယျနှထုပျ ကနျြသေးလဲ မေးကွညျ့တော့?? မုနျ့ဖတျထုပျက (၆၀)လောကျ ကနျြသေးတယျ…ဒါလေး ရောငျးကုနျမှ နောကျနေ့ ထမငျးစားရမှာ သား ကဲ…အကုနျ ယူမယျ အဖိုး…ဘယျလောကျထားမလဲ ဗြ?? (၈)ထောငျပဲ ပေးပါ သားရယျ…ဝယျမဲ့လူလဲ မရှိ…လမျးမှာ လူလဲ မရှိတော့ဘူး…အဖိုး အိမျလဲ ပွနျခငျြနပွေီ ဟုတျ အဖိုး…ရော့ (50,000) Ks … အဖိုး အိမျကို ကားငှါးပွီပွနျ​နျော ကြေးဇူးပါ သားရယျ…အဖိုး ပြျောလိုကျတာ…အိမျအပွနျ အကုနျကုနျသှားပွီ…ဝမျးသာလိုကျတာ ဟုတျ အဖိုး…ဂရုစိုကျပွီ ...
ခန်ဓာပကျြကိနျးရှိမရှိတှကျနညျး သာထကျဇျော(မကှေး) အခု ကြှနျတျော ဖျောပွပေးမယျ့ ခန်ဓာပကျြကိနျးတှကျနညျးက တှကျနညျးနဲ့ငွိတဲ့လူတိုငျးကို”ကြိနျးသေ သရေမယျ”လို့ ဆိုလိုခွငျးမဟုတျပါကွောငျး ဦးစှာသတိပေးလိုပါတယျ ။ အောကျဖျောပွပါတှကျနညျးကို နာမကနျြးဖွဈနတေဲ့လူ၊ အိပျယာထဲဘုနျးဘုနျးလဲပွီး နာလနျမထူနိုငျတဲ့လူတှမှောသာတှကျကွညျ့ပွီး ကနျြးမာရေးအညံ့ရှိတဲ့နှဈနဲ့ကွုံကွိုကျနပေါက ဓာတျရိုကျ ဓာတျဆငျ ယတွာတှနေဲ့ ကနျြးမာရေးအညံ့တှကေိုကြျောလှားနိုငျပါစကွေောငျး မတ်ေတာရှထေ့ား၍ ဖျောပွပေးခွငျးသာဖွဈပါတယျ။ ယတွာတှကေိုတော့ လကျတလောကနျြးမာရေးညံ့နတေဲ့ မညျသူမဆို ခန်ဓာပကျြကိနျးကွုံကွိုကျသညျဖွဈစေ ၊ မကွုံကွိုကျသညျဖွဈစေ လိုကျပါလုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ ခန်ဓာပကျြကိနျးလင်ျကာက အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါတယျ။ ၁။ အာယုဒီဃံ၊ မသှမှေနျ၊ ဇီဝဂွိုဟျနံနှော။ ၂။ တွိသုံးတနျ၊ မွှောကျတုံပွနျ၊ ကိုးတနျးဘုဉ်ဇကော။ ၃။ ...